यो कसरी काम गर्दछ - Djs, Vjs, नाइटक्लब 2020 को लागी NYE काउन्टडाउन
2020 का लागि आधिकारिक NYE काउन्टडाउन एक सब भन्दा शक्तिशाली डीजे र नाइटक्लब नयाँ वर्ष पूर्वानुमान उपकरणहरू मध्ये एक हो। हामी उद्योगमा 19 वर्ष भन्दा बढि भइसकेका छौं र क्रान्तिकारी बनाएका छौं कि कसरी डीजे, नाइटक्लब र अन्य आतिथ्य स्थलहरूले कुनै पनि आकारका दर्शकहरूको साथ पागल मात्रामा उर्जा सिर्जना गर्दछ। आधिकारिक NYE काउन्टडाउनका निर्माताहरू 1990 को शुरुदेखि नै DJs र नाइटक्लब / रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू छन्। त्यस समयमा तिनीहरूले वर्षौं बर्ष, विश्वभरि धेरै बजार र स्थलहरूमा ध्यान दिए कि उनीहरूको भीड र ग्राहकहरू नयाँ रातको साँझमा मध्यरातमा लाग्ने बित्तिकै खस्किए। त्यसोभए, तिनीहरू एक सरल समाधानको साथ आए ...
पहिले, तिनीहरूले चार मिनेट सिर्जना गरे "NYE अनुकूलित काउन्टडाउन" अडियो फारममा। त्यसोभए, केहि बर्ष पछि उनीहरूले अत्यधिक प्रशंसित 4K, ग्राफिक-गहन भिडियो काउन्टडाउन सिर्जना गरे जुन नयाँ वर्षको पूर्व घटनाहरू सारा विश्वमा परिवर्तन भयो।
NYE काउन्टडाउन डीजेको साथ अनुकूलन गरिएको छ र ठाउँहरुमा पेशेवर स्वरले नामावली र तिनीहरूको लोगोको गणना भित्र लोगो लोगो।
The NYE Countdown is an exclusive yearly subscription for professional working Disc Jockeys, Mobile DJs, VJ’s or Video Jockeys, Nightclubs, Bars, Radio Stations, Casinos, Hotels, Resorts, Record Pools, and Entertainment Venues.
4 भाषाहरूमा आधिकारिक NYE काउन्टडाउन उपलब्ध छ; ई ,्ग्लिश, ESPAÑOL, फ्रान्सेइस र ड्युश।
तपाईंको अर्डर राख्नुहोस्
तपाईंको काउन्टडाउन प्रकार छान्नुहोस्। तपाईंको लोगो, इच्छित कस्टम आवाज पार्ट्स, फाइल ढाँचा, र अन्य उपलब्ध विकल्पहरू अपलोड गर्नुहोस्।
काउन्टडाउन प्राप्त गर्नुहोस्
नयाँ वर्षको पूर्व भन्दा पहिले तपाईंको अनुकूलित काउन्टडाउन प्राप्त गर्नुहोस्, ग्यारेन्टीड! (* सामान्यतया, 48-72 घण्टा पछि तपाईं आफ्नो अर्डर राख्नुहुन्छ)
11 मा प्ले थिच्नुहोस्: 56PM र टाढा जानुहोस्!
त्यो हो! 11 मा तपाइँको प्रणालीमा भर्खरै हिट गर्नुहोस्: 56 अपरान्ह नयाँ वर्षको पूर्व संध्या… र जादू तपाइँको सामने भएको हेर्नुहोस्। प्ले प्रेस गर्नुहोस्, टाढा हिँड्नुहोस्, र भीडलाई पागल भएको हेर्नुहोस्! (* ईयरप्लगहरू समावेश छैनन्, हस)